Top 10 Fikradaha ku saabsan sida loo helo Website More Hits - Talobixin kooban
Mid ka mid ah siyaabaha loo adeegsado internetka ayaa ku guuleysan kara gaadiidka sida ugu badan uguna macquulsan goobta. Tobanahan talooyin ee Maxad Bell oo ah Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , waa in ay kordhiyaan wadada guud ee taraafikada iyo boggaga internetka
# 1. Gudbi sirta sadexda raadiyaha s. Waxay yihiin Google, Bing, iyo Yahoo (hadda waxaa ku shaqeeya barta Bing ee Microsoft) - rent pc computer. Sidan, dadka waxay helayaan macluumaadka shirkadda marka ay samaynayaan baaritaankooda
# 2. Abuuri fiidiyowyo tayo leh oo u gudbiya shabakadaha internetka wadaagista fiidiyowga. Xaqiiji inaad ku darto URLkaaga bilowga iyo dhamaadka fiidiyowga, iyo sidoo kale aagga sharaxaadda. Fiidiyowyada wacyigelinta waxay dad badan ka helaan inay booqdaan goobta.
# 3. La wadaag bogga internetka ee Facebook. Dadka aragtida xariirka waxay doonayaan inay riixaan oo ay fiiriyaan waxa ay u baahan tahay. Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan Facebook waa marka ay sidaas sameeyaan, asxaabtooda waxay sidoo kale arki doonaa ficilkan oo doonaya in ay sidoo kale guji. Hagaajinta waxyaabaha ku jira bogga adigoo la wadaagaya maqaalo iyo bogag cusub si loo ilaaliyo socodka joogtada ah ee taraafikada taraafikada . Abuurista bogagga ganacsiga ee Facebook waa lacag la'aan.
# 4 Mar walba hubi in waxyaabaha la abuuray uu yahay mid tayo leh ka dibna u gudbin sheekooyinka maqalka ee caanka ah. Ku qor sanduuqa bio qoraalka ah, gali cinwaanka boggiisa si dadka isticmaala ay u soo booqdaan haddii ay jecel yihiin waxyaabaha la bixiyey. Waa inay sidoo kale la xiriirtaa adeegga la bixiyo..
# 5. La qaybso URL-ka shabakadda ee dadka kula socda Twitter. Waqtigan xaadirka ah, Twitter ayaa hoggaanka ugu sarreeya sida ugu badan ee loo isticmaalo barta internetka. Halkan, dadku waxay u diri karaan farriimo qaab muuqaal u ah dadka raacsan. Waxay leedahay awood wayn haddii la isticmaalo habboon. Waxaa sidoo kale jira ikhtiyaarka ah in lagu rakibo sifooyinka bulshada ee halkaasoo dadka isticmaala ay si toos ah ula wadaagi karaan boggaga kale sida Facebook iyo wixii la mid ah.
# 6. Kaalay sawirada hal-abuurka ah kuna soo dheji goobtaada. Isticmaalayaasha muuqaalka sawirada ayaa la wadaagi doona bogagga sida Pinterest. Waa mid caqli gal ah in sawirada midkood la wadaago goobaha caynkaas ah maaddaama ay tahay meesha ugu saraysa ee warbaahinta bulshada ee la wadaago sawirrada. Waxay u shaqeyneysaa Facebook iyo Twitter, iyadoo ay ugu wacan tahay inay si ballaaran u gaarto, waxay u adeegtaa ilaha wanaagsan ee shabakada taraafikada sida dadku u arkaan sawirka inay doonayaan inay la wadaagaan asxaabtooda.
# 7. Gudbi sirta si aad u muujisid bogagaha huruuda ah iyo buugaagta degaanka. Raadi liistada caan ku ah goobta shaqada ama dalka. Haddii dadku ay sameeyaan su'aal ah oo ku habboon waxa ay boggaan bixiyaan, waxaa jira suurtogalnimo sare oo ay ku noqon doonto qayb ahaan natiijooyinka.
# 8 Hubi in goobta ay ka muuqato qaybta xayeysiiska ee ugu sareysa. Bogagga internetka, dhammaan milkiilaha wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo waa inuu xayeysiiso xayaysiiskooda, oo leh faahfaahin faahfaahsan, ma iloobin inay ku jirto URL. Marka macaamiishu ay booqdaan goobaha caanka ah ee caanka ah, waxay heli doonaan fursad ay ku xayeysiiyaan xayaysiinta, haddii sharaxaaddu ay ku filneyso, waxay booqan doonaan goobta
# 9 Ka faa'iideysiga mushaharka barnaamijka guji (PPC). Waa doorasho lacageed oo u dira taraafikada hubinta is-beddelka. Maxaa dhacaya waa goobta ay u muuqato in ay tahay liis la socdo mid ka mid ah mashiinnada raadinta iyo helaa hits marka dadku raadiyaan ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan.
# 10 Isticmaal SEO. Farsamada waxay ka caawisaa ganacsigu inuu sarreeyo heerka bogga natiijooyinka raadinta. Goobaha wanaagsan waxay yeelan doonaan URL-yadooda oo ay wadaagaan dadweynaha. Ka hor inta aan la fulin SEO, xaqiiji inaad raacdo shuruudaha mashiinka raadinta.